मलेसिया गएपछि किन हराउँदै छन् नेपाली युवा-युवतीहरु ? यस्तो छ कारण - ramechhapkhabar.com
मलेसिया गएपछि किन हराउँदै छन् नेपाली युवा-युवतीहरु ? यस्तो छ कारण
यो त उजुरी परेकाको मात्र संख्या हो । अन्य उजु,री नपरेका धेरै नेपालीका परिवार अझै आफ्ना आफन्त कुरेर बसिरहेका छन् ।मुस्लिम देश भएर पनि मलेशियामा कानुन निकै खुकुलो छ ।
यहि खुकुलो कानुनको फाईदा उठाएर मलेशिया पुगेका केहि नेपालीहरु मोजमज्जा र रस-रमाईलोमा भुल्ने गरेका छन् । विशेष गरि विदेशी कामदारहरु लक्षित गरेर संचालन गरिएका होटल, दोहोरी, क्लब, मिनी क्यासिनो, यौ”न अ”ड्डा लगायतका कारण धेरै नेपाली युवाहरु कुलतको दलदलमा फसिरहेका छन् ।
मलेशियाको केएल, केलांग, पेनांग, पेराक, जोहोरबारु लगायतका शहरहरुमा नेपाली श्रमिकहरुलाई नै लक्षित गरेर हजारौं होटल रेष्टुराँ र मसाज सेन्टर संचालन गरिएका छन् ।
यि होटल रेष्टुराँ तथा क्लबहरुमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नकै लागी महिला कामदारहरु राखिएका छन् । परिवार र श्रीमती छोडेर जवानीमा विदेश भाशिनेहरु यिनै महिला कामदार संग जिस्कने र रमाईलो गर्न पाउने आसमा ति होटल रेष्टुरा पुग्नेगरेका छन् ।
नेपालीहरु द्वारानै संचालित यस्ता होटल रेष्टुराँहरुमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नको लागी नेपाली युवतीहरु नै प्रयोग हुनेगरेको पाईएको छ। वेटरका रुपमा कार्यरत यस्ता युवतीहरु कमाई बढाउन यौ”न ध न्दामा संलग्न हुनेगरेको पाईएको छ ।
आफु संगै काम गर्ने धेरै नेपाली युवाहरु ईन्डोनेशियन युवतीहरु संग प्रेममा परेर लिभिंग टुगेदरमा बसिरहेको उनको भनाई छ । यसरी बस्न थालेपछि कमाएको तलब उतै सकिने र पैसा पठाउन नसकेपछि घरमा सम्पर्क टुट्ने गरेको छ ।
केहि नेपालीहरु यिनै ईन्डोनेशियन युवती संगको प्रेमको द्व;न्दको कारण पनि बे;पता हुनेगरेका छन् । मलेशियामा रहेका भारतीय मुलका मलेशियन युवाहरु र नेपाली युवाहरुको रोजाई जुbद्धा बेलाबखत नेपालीहरुले ज्या:न गुमाउने र बेपत्ता हुने क्रम पनि बढेको छ आफुले मनपराएका युवतीलाई नेपाली युवाले मनपराएको वा जिस्काएको थाहा पाएमा भारतीय मुलका मलेशियन ( तामिल) हरुले गौडा ढुकेर आbक्रमण गर्ने गरेको घटना मलेशियन कम्पनीहरुमा सामान्य जस्तै हो ।